China Aluminium CNC Machining Parts factory na ndị na -eweta ya | BASILE
Ọrụ CNC Machining
Akụkụ Ngwa CNC
Akụkụ CNC Metal
Akụkụ CNC igwe
Akụkụ ichepụta ọla
Nkenke machining Parts
Nkenke atụgharị Parts
Ọrụ mpempe akwụkwọ & Ọrụ stampụ
Ọrụ Ngwaahịa Titanium
Ihe Ndị Anyị Pụrụ Ime
Akụrụngwa Anyị Nwere
Ihe Ndị Na -emetụta Mgbagwoju Otu Akụkụ
Ọrụ Akụkụ Ngwa CNC nke emere emere
Ọkachamara OEM CNC Machined Parts
Akụkụ CNC Machining nkenke Machinery Parts
Akụkụ Metal CNC Machining
Ọrụ nrụpụta CNC omenala
Ọrụ nrụpụta mpempe akwụkwọ
Mpempe akwụkwọ Metal Parts Manufacturer
Akụkụ igwe aerospace omenala
Mpempe akwụkwọ metal Aluminom
Nkeji Ịtụ ibu:Nkeji 1 Ibe/iberibe.
Tụkwasịnụ Ikike: 1000-50000 iberibe kwa ọnwa.
Agbanye ikike: φ1 ~ φ400*1500mm.
Ikike ikike: 1500*1000*800mm.
Ndidi: 0.001-0.01mm, enwere ike ịhazi nke a.
Ike ike: Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3, wdg, dịka arịrịọ ndị ahịa siri dị.
Ụdị faịlụ: A nabatara CAD, DXF, STEP, PDF na ụdị ndị ọzọ.
Ọnụahịa FOB: Dika ihe osise na ịzụrụ ndị ahịa Qty.
Ụdị Usoro: Ntughari, Milling, Drilling, Grinding, Polishing, WEDM Cutting, Laser Engraving, wdg.
Ihe dị: Aluminium, igwe anaghị agba nchara, nchara carbon, titanium, ọla kọpa, ọla kọpa, alloy, plastik, wdg.
Ngwa nyocha: Ngwaọrụ nnwale Mitutoyo niile, CMM, Projector, Gauges, Iwu, wdg.
N'elu Ọgwụgwọ: Oxide Blacking, Polishing, Carburizing, Anodize, Chrome/ Zinc/ Nickel plating, Sandblasting, ihe osise Laser, ọgwụgwọ ikpo ọkụ, mkpuchi ntụ ntụ, wdg.
Ịlele dị: Nabatara, nyere n'ime 5 ruo 7 ụbọchị ọrụ ya.
Mbukota: Ngwugwu dabara adaba maka njem ụgbọ mmiri ogologo oge ma ọ bụ nke ikuku.
Port nke loading: Dalian, Qingdao, Tianjin, Shanghai, Ningbo, wdg, dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị.
Etiti oge: 3-30 ụbọchị ọrụ dị ka ihe dị iche iche achọrọ mgbe ị natasịrị ụgwọ dị elu.
Kedu ihe anyị ga -emere gị?
BMT bụ ụlọ ọrụ na-arụpụta CNC China, na-enye ọrụ nkenke dị oke ọnụ dị ka nke dị n'okpuru:
▶ Ọrụ CNC Machining
Services Ọrụ CNC Milling & Ọrụ ntụgharị
Omenala CNC machining na CNC igwe
Nkenke CNC machining na CNC igwe
Ss Brass CNC machining
▶ Carbon Steel CNC machining
▶ Igwe anaghị agba nchara CNC machining
▶ 3 Axis CNC igwe
▶ 4 Axis CNC igwe
▶ 5 axis CNC machining
Components CNC Machined Components
▶ Prototype CNC machining, wdg
Anyị nwere ike nyere gị aka ịchekwa ọnụ ahịa igwe ma melite ogo ngwaahịa site na iji igwe ihe na nkenke ọgbara ọhụrụ 3-5 axes CNC machining na CNC Milling, wdg.
Anyị kpebisiri ike ịnye gị ngwaahịa CNC kachasị mma na ọrụ nrụpụta CNC n'ọtụtụ ọnụahịa asọmpi.
Dị ka onye ahịa na-ahazi CNC nkenke igwe nrụpụta ihe na China, anyị na-aga n'ihu na-emeziwanye ihe na-aga n'ihu nke akụkụ igwe eji arụ ọrụ yana ọrụ nrụpụta omenala.
Mgbe ịchọrọ onye na-emepụta China CNC machining ọkachamara ọkachamara na igwe CNC dị elu, igwe igwe CNC na ntụgharị CNC, ndị otu anyị nwere oke nwere ike iji ngwa anyị rụpụta gị akụkụ dị mgbagwoju anya na nke siri ike maka gị. lathes, ebe ntụgharị CNC na igwe EDM waya.
Anyị bụ ọkachamara n'ichepụta CNC Machining, CNC Milling, CNC Turning, CNC machining machining, CNC Machined Parts, CNC Machining Parts, CNC Milling Parts, CNC Turned Parts, CNC Machining Services, CNC Milling Services, CNC Turning Services, wdg.
Site na nkenke nkenke CNC Machining, lathes CNC, CNC na -atụgharị igwe, igwe EDM waya na ọtụtụ ngwa nrụpụta igwe nke abụọ, anyị nwere ike ijikwa iwu ruru nde nde akụkụ.
Gịnị mere ị ga -eji họrọ anyị?
▶ Ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe na CNC Machining/Machined Part;
O buterela ndị isi ụlọ ọrụ dịka BMW, Toyota na ụfọdụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala;
Success Ihe ịga nke ọma anyị dabere na ndị ọrụ ama ama na ndị na -eso anyị arụ ọrụ n'ikwesị ntụkwasị obi;
▶ A na -enye ọkachamara maka otu akụkụ yana ọrụ imepụta oke;
▶ Nhazi nkenke CNC nke oge a na igwe eji arụ ọrụ pụtara ọnụ ọnụ;
▶ Ahụmịhe bara ụba na ahụmịhe nrụpụta;
Mee ka usoro nrụpụta ngwa ngwa gị dị mfe;
Nkenke dị elu, izi ezi dị elu, na nnabata siri ike iji kwe nkwa nha eserese;
▶ Nkezi 5-7 ụbọchị ọrụ ntụgharị oge mmepụta yana 98% na nnyefe oge;
▶ Otutu nhọrọ nke ihe igwe iji zute ihe ndị ahịa chọrọ;
▶ Nkwupụta ngwa ngwa na asọmpi n'ime awa 24 mgbe ị nwetasịrị ajụjụ;
Site na ntinye ọnụ ahịa dị oke ọnụ, anyị na-eguzogide Ogo ngwaahịa anyị.
Na -anwale ngwaahịa niile dabere n'ụkpụrụ obodo ndị ahịa tupu nnyefe;
▶ Ịme akwụkwọ nkwupụta kọstọm na nwechapụ pụrụiche yana ịhazi ọrụ ọnụ ahịa dị oke ọnụ ahịa yana ọnụ ahịa dị oke ọnụ ahịa.
Satisfaction afọ ojuju ndị ahịa dị elu ma na -ekwu oke mma na ọrụ;
Feedback Nzaghachi ngwa ngwa sitere na ọrụ ndị ahịa, anyị na -anya isi na ụzọ anyị si agakwuru ndị ahịa. Ebumnuche ịbụ onye gị na ya na-eme ogologo oge, ọ bụghị naanị onye na-eweta ngwaahịa.
Kedu ụlọ ọrụ anyị na -arụ?
Ngwa CNC anyị ejirila rụọ ọrụ n'ọtụtụ ọrụ, dị ka elektrọnik, ọgwụ, ụgbọ ala, mmiri, ọrụ ugbo, ngwa igwe, semiconductor, nrigbu mmanụ, ike, nri, teknụzụ dị elu, ndị agha, wdg.
Kedu ihe ndị anyị ji arụ ọrụ?
Anyị nwere ike igwe ma akụkụ Metal & Plastik. Ihe igwe gụnyere Aluminium, Brass, Copper, na igwe anaghị agba nchara, dịka AL5052, AL6061, AL7075, SUS303, SUS304, SUS316, 316L, LY12, 65Mn, Cr12, 40CrMo, AL6063, AISI12L14, Y15, 45#, Q275, Bakelite, POM, nylon, Teflon na acrylic, wdg.
Kedu otu esi enweta nkwupụta okwu ahịa n'aka anyị?
Biko zitere anyị eserese gị ma ọ bụ ihe nlele nwere nkọwa zuru ezu maka anyị site na email. Ụdị eserese nwere ike ịbụ 2D ma ọ bụ 3D dị ka JPG, PDF, DWG, na STP. Mgbe ahụ anyị ga-ahaziri gị ọnụego ọnụ ahịa maka gị n'ime awa 48.
Maka idobe akwụkwọ ozi nzuzo nke ndị ahịa anyị na -adọta ozi, anyị na -akwanyere ikike ọgụgụ isi gị ùgwù na enweghị ikike edere ede, anyị agaghị egosi ndị ọzọ ọ bụla ihe osise gị na ozi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere NDA (Nondisclosure Agreement), zitere anyị ya, anyị ga -abịanye aka ma weghachitere gị ya.
Kpọtụrụ anyị ugbu a maka ọrụ CNC machining omenala gị. Ị nwere ike ịtụ anya nlebara anya ozugbo. Anyị na-atụkwa anya ịmalite mmekọrịta azụmahịa na-aga nke ọma na-aga n'ihu. Ọ bụghị naanị na anyị chọrọ ịbụ onye nrụpụta akụkụ CNC na-emepụta ihe na onye na-ebubata ya kamakwa onye mmekọ ntụkwasị obi gị ogologo oge na China maka imepụta CNC. Nabata eserese na nlele.
Nke gara aga: Ọrụ nrụpụta mpempe akwụkwọ
Osote: Ọrụ nrụpụta CNC omenala
Akụkụ igwe igwe CNC
Akụkụ Plastic CNC Machining
Ngwa CNC nhazi
Ngwa akụrụngwa igwe CNC
Akụkụ CNC Machining Aluminom
Igwe anaghị agba nchara nkenke CNC machining
Incubator Business dị elu. Mpaghara mmepe, Dalian City, Liaoning, China.
Ọkachamara dị elu CNC Machining Manufacturer
Omenala igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ, Akara akpaghị aka, High-End mpempe akwụkwọ Metal Parts ngwaahia, Igbe galvanized, Igwe eji arụ ọrụ titanium, Akụkụ Ngwa CNC,
Skype nke BMT